सरकारको दुई वर्ष: जनता निरास ! प्रधानमन्त्री आशावादी !
काठमाडौं । ‘राजनीतिक संक्रमणकालको गोलचक्कर अन्त्य भएर स्थिरता कायम भएको छ, सरकार अल्पकालीन प्रतिफल दिने कार्यमा मात्र केन्द्रित नभएर दीर्घकालीन विकास योजना सञ्चालन गर्न बलियो आधार तयार भएको छ’, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार गठन भएको एक वर्ष पुगेको अवसरमा गतवर्ष फागुन ३ गते राष्ट्रका नाममा गरेको सन्देशको अभिव्यक्ति हो । उनले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने आधारहरू तय गरेको बताउँदै अब खिन्नु हुनुभन्दा उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था आउने बताएका थिए । यो समाचार आजको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
संसद्बाट आज सम्बोधन
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज आफ्नो दुई वर्षे कार्यकालका विषयमा संसद्बाट सम्वोधन गर्दैछन् । शुक्रबार नै सम्बोधन गर्ने तयारी गरेपनि राष्ट्रिय सभा सदस्यको निधनका कारण आजका लागि सरेको हो ।
प्रतिनिधिसभाको बिहान ११ बजे बस्ने बैठकलाई सम्बोधन गर्ने प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिए । संसद्को कार्यसूचीमा प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक महत्वको विषयमा वक्तव्य दिने बताइए पनि उनले आफ्नो कार्यकालको २ वर्षमा भएका उपलब्धिबारे संसद्लाई जानकारी गराउने बताइएको छ ।
प्रकाशित : शनिबार, फागुन ०३, २०७६०३:५०